Boorsaani oo ka sheekeeyay xanuunka uu leeyahay xil ka qaadis aanan laguugu wargalin - Caasimada Online
Home Warar Boorsaani oo ka sheekeeyay xanuunka uu leeyahay xil ka qaadis aanan laguugu...
Boorsaani oo ka sheekeeyay xanuunka uu leeyahay xil ka qaadis aanan laguugu wargalin
Muqdisho (Caasimada Online)-Gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir Yuusuf Xuseen Jimcaale (Boorsaani), ayaa markii ugu horeysay ka hadlay xil ka qaadista lagu sameeyay Gudoomiyihii gobolka Banaadir Taabid Cabdi Maxamed.
Boorsaani oo u waramaayay Idaacada GJ ee magaalada Muqdisho ayaa sheegay in ay muhiim tahay in aan lagu deg degin xilka ka qaadista Madaxda xilka heysa.
Boorsaani, waxa uu sheegay in xil ka qaadista ay tahay mid sahlan balse ay ka dhalaneyso caqabadooyin badan oo isbarbaryaac dhanka maamulka ah.
Boorsaani, waxa uu tilmaamay in qof waliba uu garankaro Guddoomiye xilka hayay muddo 9 Bil hadana laga qaaday xilka uu hayay waxa uu sameynkaro ama qabankaro mudadaasi inaanu aheyn wax noqonkara guul.
Boorsaani, waxa uu sheegay in musiibada heysata Gobolka Banaadir ay koow ka tahay Isbedelka degdega ama is xigxiga ee lagu sameynaayo Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ee markaas magacaaban, waxa uuna cawaaqib xumada laga dhaxlana sheegay inay dusha saran doonto dowlada jirta.
Waxa uu sheegay in isbedelada degdega ah uu ka dhalankaro xasilooni daro siyaasadeed, mid amni iyo mid dhaqaale xumo oo joogta u noqonkarta Gobolka Banaadir, waa haddii aan laga joogin isbedelka joogtada ah.
Haddalka Boorsaani ayaa kusoo beegmaaya xili Madaxweynaha Somalia Maxamed C/llahi Farmaajo uu si lama filaan ah xilka uga qaaday Guddoomiyihii Gobolka Banaadir Taabit oo lagu eedeeyay inuu waday qorsho lid ku ahaa Xukuumada Somalia.